संस्कृति वीरेन्द्र रमण
नायब सुब्बा विरुद्ध दुई करोड ४४ लाख भ्रष्टाचारको मुद्दा
दुई वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा कार्यरत नायब सुब्बा गणपति झा विरुद्ध दुई करोड ४४ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
बजेट पुस्तिका प्रकाशन नहुँदा मधेश प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन सकेको छैन।
प्रेमविवाहपछि घर लैजान अनुराेध गर्दा श्रीमान्‌ले लगाए करेन्ट‚ युवतीको अस्पतालमा बिचल्ली आठ महीनाअघि प्रेमविवाह गरेकी युवतीले घर लैजान अनुराेध गर्दा उनका श्रीमान्‌ करेन्ट लगाएर भागेका छन्। घाइते युवती धनुषाको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा छटपटाइरहेकी छन्।
मधेश सरकारले ल्यायो ४६ अर्बको बजेट, साइकलदेखि ल्यापटप वितरण योजना मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
जसपा आफै फुट्न लागेका वेला लोसपासँग एकीकरणको नारा आन्तरिक विवादले जसपा फुटको संघारमा पुगिरहेको वेला लोसपासँग एकताको विषय पनि चर्चामा आएको छ।
दुई वर्षपछि लयमा फर्किँदै मुक्तिनाथ क्षेत्र कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण दुई वर्ष सुनसान बनेको मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा फेरि पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ।
३३ अर्बको बजेट ल्याउने मधेश सरकारको तयारी मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसअघि छलफलका लागि बुधबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक पेश गरिएको छ।
लोसपालाई स्वागत गर्न तयार छौं: उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका छन्।
उपेन्द्र यादव सहभागी जसपा धनुषाको बैठकमा कुटाकुट स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा गर्ने बोलाइएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) धनुषाको बैठकमा कुटाकुट भएको छ।
मधेश प्रदेशमा विपन्नलाई मासिक एक हजार निर्वाह भत्ता दिने तयारी मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
यस्तो छ मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ सहित) आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै छ। आइतबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
जहाज दुर्घटनामा एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु‚ शोकमा डुब्यो लोटा गाउँ तारा एअरको जहाज दुर्घटनामा धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका-११ लोटा गाउँका एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु भएको छ। जसले गाउँ नै शोकमा डुबेको छ।
मधेशमा किन खुम्चियो ठाकुरको लोसपा?
स्थानीय तहको चुनावमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेशमा खुम्चिएको छ।
स्वतन्त्रबाट जितेका मेयर कांग्रेसको विजय जुलूसमा
मेयर बन्न प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका आजाद र कुशवाहा पराजित मधेश प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका शेख अबुलकलाम आजाद र उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा पराजित भएका छन्। उनीहरूले नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
वीरगञ्जको मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंह विजयी मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का राजेशमान सिंह निर्वाचित भएका छन्।
जनकपुरका विद्रोही विजेता पाँच वर्षअघि जनकपुरधाम उपमहानगरको मेयरमा पराजित मनोजकुमार साह सुडीले यस पटक भने विद्रोह गरेरै विजय हासिल गरेका छन्।
जनकपुरधामको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज साह निर्वाचित भएका छन्।
जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार साहको अग्रता कायमै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साहले अग्रता कायमै राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका ‘बागी’ उम्मेदवार साहले १२ हजार २८३ मत प्राप्त गरेका छन्।
जनकपुरधाममा स्वतन्त्र उम्मेदवार साहको अग्रसरता कायमै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साहले अग्रता कायम राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका ‘बागी’ उम्मेदवार साहले नौ हजार ७७४ मत प्राप्त गरेका छन्।
वडाध्यक्षमा उठेका त्रिविका पूर्व विभागीय प्रमुखले पाए एक मत धनुषाको हंसपुर नगरपालिका-२ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार परमेश्वर कापडीले एक मत मात्रै पाएका छन्।
सीके राउत मधेशको नयाँ शक्ति बनेका हुन्? राजनीतिकभन्दा पनि सामाजिक मुद्दा बोकेर स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेश प्रदेशमा नयाँ शक्तिका रूपमा देखिएको छ।
रौतहटको राजपुरमा कांग्रेस विजयी रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मेयरमा मोहम्मद राजिक आलम ६ हजार ३३५ र उपमेयरमा जमिला असगरी ६ हजार २६८ मत सहित निर्वाचित भएका हुन्।
मधेश प्रदेशका मुख्य मन्त्री राउतकी श्रीमती पराजित मधेश प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतकी श्रीमती जलेखा खातुनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार बेहोरेकी छन्।
बर्दिबासमा गोलाप्रथाबाट दोस्रो पटक निर्वाचित घोषणा सिल नखोलिएको बाकस भेटिएपछि गरिएको मतगणनामा बराबरी हुँदा महोत्तरीको बर्दिबासमा गोलाप्रथाबाट निर्वाचित घोषणा गरिएको छ।